Miarahaba Anareo Nahatratra Ny Andro Iraisampirenena Ho An’ny Vehivavy Izahay Goverinoran’ny Federasiona Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Marsa 2017 20:01 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Français, عربي, English
Araka ny loharanom-baovao ao Kremlin, avy any amin'ny farany an-tampony ny baiko: hankalaza ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy “amin'ny fomba hafakely” ireo goverinora Rosiana .
Tamin'ny 7 Martsa, nitatitra ny gazety Kommersant fa nanome torohevitra ny lehiben'ny faritra sy ny repoblika ao Rosia ny Fitantanan-draharahan'ny Filoham-pirenena mba hankalaza ny 8 Martsa amin'ny fomba hafakely, nandà ny tatitra anefa ny mpitondrantenin'ny Kremlin Dmitry Peskov ary governora vitsivitsy no efa nanatanteraka ny didy: kanefa naka lahatsary somary tsotra ihany ny ankamaroan'ireo lehiben'ny faritra nirary ireo mpifidy azy hankalaza am-pifaliana ny Andro Iraisampirenena ho an'ny Vehivavy, na nanome lahateny tao amin'ny fankalazana tao an-toerana, somary nananihany kokoa tamin'ny fisian'ny tsahon'ny didim-panjakana ny goverinora sasany.
Naka ny lahatsarin'ny “mannequin challenge” i Valery Shantsev, goverinoran'ny Faritra Nizhny Novgorod mba hanehoana ny fankasitrahany ireo vehivavy. Na raha tsy izany, nilaza i Shantsev tany amin'ny faran'ny lahatsary fa ” misitery sy zava-miafina ao ambadiky ny fitombokase fito” ny vehivavy, kanefa “vonona ny hanampy anao isan'andro” ny lehilahy. Nofintininy tamin'ny hoe: “Mamirapirata! Mifalia! Mazotoa! Arahaba Tratry ny Andro Iraisampirenena ho an'ny Vehivavy! “
Nanana hafatra somary mampahery bebe kokoa i Alexander Levinthal, goverinoran'ny Repoblika Mizakatena Jiosy , tao amin'ny firariantsoa noraketiny , izay nanasongadina ny felam-boninkazo misidina sy ny fandraisana gitara .
Ry vehivavy! Afaka manao fahagagana ianareo. Miakatra ny tendrombohitra ianareo ary miroboka any ambanin'ny ranomasina. Mamorona feonkira mahafinaritra ianareo ka manao firaketana eto amin'izao tontolo izao . Manorina trano ianareo sady mandrava ny vato misakana rehetra. Manoratra tantara mamirapiratra ianareo sy mahavita fahitana ara-tsiansa. Ianareo no loharano tsy mety ritran'ny aingam-panahy. Noho ny aminareo ihany no mahatonga anay ho maherifo be herim-po sy be fitiavana tsy azo laizina…
Na izany aza, azo inoana fa tsy dia hafakely loatra ny nataon'ny manampahefana iray mba hanarahana ny baikon'ny filoham-pirenena : nangala-tahaka tononkalo izay nolazainy fa nosoratany momba ny vehivavy tany amin'ny faritaniny i Igor Vasilev, goverinoran'i Kirov. Mivaky toy izao ny andininy farany tamin'ny nosoratan'i Vasilev :
Manana ny oram-panala fotsy indrindra isika
Ary sahy milaza aminao aho tsy misy tsiny
Ao Rosia, tsara tarehy indrindra ny zava-drehetra
Fa mbola tsara tarehy kokoa ny vehivavy ao Vyatke!
Nahatsikaritra ny tranonkala kirov-portal.ru, na izany aza, fa dikan-tononkalon'i Aleksandr Vulykh somary novaina kely io tononkalo io, izay nozarain'i Vasilev tao amin'ny pejy VKontakte tamin'ny taona 2014 .
Mivaky toy izao ny tononkalon'i Vulykh ôrizinaly :
Manana ny orana mivatravatra indrindra
Fa mbola tsara tarehy kokoa ny vehivavy ao Rosia!
Fa tsy ireo goverinora ihany no nankalaza izany tamin'ny fomba hafa kely: nandray anjara tamin'ny hetsika ihany koa na dia i Putin aza, nitanisa ny tononkalo nosoratan'i Konstantin Balmont tao amin'ny fanambarana nataony androany :
Ny vehivavy – miaraka amintsika rehefa teraka isika
Ny vehivavy – miaraka amintsika amin'ny ora farany,
Ny vehivavy – ny fanevantsika rehefa miady
Ny vehivavy – ny fifalian'ny maso mibaliaka.